Crash ... mba foo-foo biko. | Martech Zone
Nyaahụ bụ ụbọchị mbụ m batara n'ụlọ wee zonked. Taa m kụrụ. Dị ka ọtụtụ, abụ m agwa. N’ụzọ na-akpali mmasị, omume m na-eme kwa izu, agbanyeghị. M na-eme ngwụsị izu m na-arụ ọrụ mgbe niile ka omume ọ bụla m nwere n'izu gara aga, ọ na-ejedebe na mgbede Saturday. Ọ bụrụ na m abịaghị ọrụ n’ụbọchị Mọnde, m na-abịakarị n’izu. Ọ bụrụ na m arụ ọrụ n’uhuruchi Mọnde… Ana m arụ ọrụ oge izu niile.
Ikpeazụ a na ngwụsị izu gara aga m rụrụ ọrụ na izu ụka niile. Anyị na-aga maka ntọhapụ na-arụ ọrụ, ma m na-erugharị ihe na-erughị ọrụ 6 n'otu oge. The adịzi omume bụ fun, but I tend to take on more and more… na m na-eme ihe á »rá» harder ike kará »‹ rá »‹ ike. N'abalị ụnyaahụ ọ jidere m, m wee daa ụra. N'abalị a, m kụrụ. Enwere m ike. Enweela m 'izu nke omume' na mmalite ọjọọ. Ugbu a, ike ga-agwụ m ozugbo m si ọrụ lọta, ikekwe m ga-ehi ụra kwa abalị mgbe m lọtara. Argh.
N'akụkụ na-enwu gbaa, nke ahụ pụtara na m na-achọsi ike, ọ bụ ezigbo ihe! N'ebe na-adịghị mma, enweghị m mmasị idozi ọrụ m. M nwere ihe magburu onwe nghọta nke ịnapụta izu okè vs. anapụta. Na-amasị m zuru okè. Akpọrọ m ya asị dị nnọọ anapụta… ezie na ndị ahịa m agaghị ama ihe dị iche. Nyefe na-apụtakarị na ọnwa ole na ole gachara, achọpụtara m onwe m 'ịmegharị' ihe m maara na m gaara eme zuru oke na nnyefe ma ọ bụrụ na enwere m oge.
Ahịa na Software na-adịkarị ka nke a, n'agbanyeghị, ị naghị eche? Oge mmechi chọrọ igbu ma na-achụpụ izu okè. Kalenda na-adịkarị mkpa karịa nsonazụ. Ọ dị mkpa iji zipu dị ike karịa mkpa iji wepụta n'ụzọ zuru oke. Ọtụtụ mgbe, ana m achọpụta na ndị ahịa ga-achụrụ ihe dị mma mma, arụmọrụ na ihe ịchọ mma iji nweta ihe na aka ha n'oge na-adịghị anya. Nke a ọ bụ ntụpọ ndị America? Rush, rosh, rosh… okuku? Ka nke a ọ bụ ntụpọ zuru ụwa ọnụ?
Anaghị m akwado 'creep'. Creep bụ mgbe nkọwa nke mmecha na-aga n'ihu 'na-akpụ akpụ' ruo mgbe ị nweghị ike mezue ọrụ. Ana m eleda 'creep' anya. Ọbụna n’enweghị nsogbu, kedu ka anyị ga-esi yie ka anyị enweghị oge iji mee ihe zuru oke?
Na South Bend Chocolate Factory, m ịtụ m kọfị na mba foo-foo… Pụtara na ọ dịghị chocolate ngaji, ọ dịghị otiti ude, ọ dịghị udara, ọ dịghị ájá nke chocolate ma ọ bụ fesaa nke sirop… naanị kọfị. Enweghị foo-foo na-enweta m kọfị m, na-enweghị echere ihe ndị ọzọ.
Mara: Ọ bụrụ na ịgabeghị Blọ ọrụ Chocolate Bend, ị na-efu nnukwu ebe na nnukwu ndị ọrụ. Ha nwere mmadu… obughi uche drones. Na oge mbụ ị nwetara mocha mara mma, jide n'aka na ị ga-enweta foo-foo. Ọ bụ ọmarịcha ọgwụgwọ.
Azu m uche… sịrị dị ka Google, Flickr, 37 Mgbama na ihe ịga nke ọma ndị ọzọ nke oge a tụbara 'foo foo'. Ndị folks a na - ewuli nnukwu sọftụwia na - enweghị foo foo. Ha na-arụ ngwa nke rụchara ọrụ ahụ, ma sie ike na ọ naghị eme karịa nke ahụ. Ọ na-arụ ọrụ. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma. Fọdụ nwere ike iche na ọ bụghị 'zuru oke' n'agbanyeghị na enweghị foo-foo. Nnukwu ihe ịga nke ọma na usoro ikuchi na-agwa m na nke a abụghị eziokwu maka ọtụtụ, n'agbanyeghị. Ha chọrọ naanị ka ọ rụọ ọrụ ahụ - dozie nsogbu ahụ! Achọpụtara m n'ọrụ m, na anyị na-etinye oge dị ukwuu na foo-foo.
Eche m ma i daa na no foo foo.
Ikekwe anyị kwesịrị ịmalite ịhazi ụzọ mgbapụta anyị n'ụzọ dị otu a ka anyị wee nwee ike ịnapụta ọfụma na ọsọ ọsọ:
Foo-foo:Kedu ihe anyị ga-akpọ ya? Kedu ka o si aga? Kedu nhọrọ niile anyị nwere ike itinye na ya? Kedu ihe ndị asọmpi anyị na-eme? Kedu ihe ndị ahịa anyị chọrọ? Olee mgbe anyị ga-eme ya?
Mba foo-foo: Kedu ihe ọ ga-eme? Kedu ka ọ ga-esi eme ya? Kedu otu onye ọrụ ga-atụ anya na ọ ga-esi mee ya? Kedu ihe ndị ọrụ anyị chọrọ? Ogologo oge ole ka ọ ga-ewe iji mee ya?
Ọkt 16, 2006 na 5:07 PM
Foo-foo, foo-foo… ka na-agbali ịghọta ihe nke a pụtara n'ihe gbasara sọftụwia, na-abụghị kọfị. Na kọfị o yiri ka ọ dị mfe zuru oke, dịka na foo-foo, ọ bụ ihe niile dị egwu na-abụghị kọfị kọfị. Site na ihe atụ gị nke ụlọ ọrụ ndị na-atụba foo-foo, websaịtị niile 2.0 ọ dị ka, sọftụwia ha ọ dị ka 'dị mfe', opekata mpe site na njirimara onye ọrụ, ma na arụmọrụ Echere m na enwere m mgbagwoju anya bụ ebe ị na-ajụ foo-foo vs. enweghị foo-foo ajụjụ, ebe m ejighị n'aka ma ụfọdụ n'ime ajụjụ ndị a na-eweta foo-foo ma ọ bụ na ọ bụghị na catagory.
Kedu ihe anyị ga-akpọ ya? Ọfọn, google, flickr na aha maka sọftụwia nke akara 37 gosipụtara nke ọma dị ka ihe dị mma ma dị mkpa, echekwara m na oge ụfọdụ abanyela na ha. Kedu ka o si aga? Mfe, dị ọcha, web 2.0… ọzọ ụfọdụ echiche banyere nke a maka ụlọ ọrụ ndị ahụ, nhọrọ… ka foo-foo m chere. Kedu ihe ndị asọmpi anyị na-eme, ka dị mkpa, ma ọ bụrụ na ha ga-eme ihe ọzọ, ma ọ bụ na ha agaghị eme ihe ha na-eme. Ihe ndị ahịa chọrọ dị mkpa… ihe ndị ahịa chere na ha chọrọ adịghị mkpa. Kedu mgbe anyị ga - eji mee ya, ka dị mkpa, ọkachasị na sọftụwia ịntanetị.
Kedu ihe ọ ga-eme? Kedu ka ọ ga-esi eme ya? No foo-foo ebe a ka m chere. Kedu otu onye ọrụ ga-atụ anya na ọ ga-esi mee ya? Nye m nke a nwere ike ịbụ foo ma ọ bụ na-abụghị foo. Kedu ihe ndị ọrụ anyị chọrọ? Echere m na ọ bụghị foo ebe a. Ogologo oge ole ka ọ ga-ewe iji mee ya. Ok otu ajuju nke abuo dika odi nzuzu nye m. Ntọala nke mbụ bụ ihe gbagwojuru m anya.
Ikekwe ajụjụ kachasị m mkpa bụ 'Gịnị mere o ji dị mkpa?'
Ọkt 16, 2006 na 6:10 PM
Are nọ n’uche n’okwu m. Ajụjụ ndị ahụ yitere nnọọ nke ọma, mana ha niile metụtara kpọmkwem ajụjụ ị jụrụ… 'Gịnị mere o ji dị mkpa?'
Enwere m onye otu na enyi, Chris Baggott, onye na-enwe obi ụtọ ịjụ "Olee nsogbu ọ na-edozi?". Aha nke ngwa, anya, nhọrọ, asọmpi, chọrọ, usoro iheomume… niile ndị na-akwụ ụgwọ anya na software ụwa, ma ọ dịghị mgbe jụrụ asked “Olee nsogbu ọ na-edozi?”
Anyị kwesịrị iwepụta oge maka ezigbo ajụjụ, karịa iji nnukwu oge zaa ndị na-ezighi ezi!